गरिबीमा डुबेका टु’हुराहरूकाे व्यथा : भोक लागे माटो, जाडो हुँदा आगो र घाम तापेर गुजारा – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > गरिबीमा डुबेका टु’हुराहरूकाे व्यथा : भोक लागे माटो, जाडो हुँदा आगो र घाम तापेर गुजारा
गरिबीमा डुबेका टु’हुराहरूकाे व्यथा : भोक लागे माटो, जाडो हुँदा आगो र घाम तापेर गुजारा
admin February 19, 2021 जीवनशैली, समाचार	0
बैतडी । दश वर्षीया सविता, नौ वर्षकी सुनीता र पाँचवर्षकी रमिला टु’हुरा बालिका हुन् । फुसले छाएको घर भ’त्किने अवस्थामा पुगेको छ । घरमा खाने अन्न छैन । भोक लागे माटो खान्छन् । जिउमा फा’टेको एकसरो लुगा बाहेक राति ओढ्ने ओछ्याउने कपडा छैन । दिउँसो घाम तापेर अनि राति आगो बालेर बस्ने गरेका छन् । यो कुनै चलचित्रको कथा होइन, बैतडीको सिगास गाउँपालिका–८, न्वादेउका तीन जना टुहुरा बालिकाको कथा हो ।
विपन्न गरिब कथित दलित परिवारमा जन्मेका तीन बहिनी विद्यालय पनि जाँदैनन् । बुवा सालिभान नेपालीको उपचार नपाएर तीन वर्ष अघि मृ,त्यु भयो । रोगी आमा अन्न माग्न गाउँ डुल्न जानु भएको छ । गाउँ डुलेर अन्न माग्न गएकी आमा फर्किन ढिलो भएपछि पाँचवर्षीया कान्छी रमिलाभोक लागे माटो खाने गरेको १० वर्षीया सविता नेपालीले पीडा सुनाउनुभयो। दलित भएका कारण अन्य समुदायका मानिसले बालिकाहरुलाई घरभित्र लैजान अप्ठ्यारो मान्ने गरेका छन् । **समाचारको पुरा भिडियो हेर्नुहोला***
बरु,कहिले काँकी एक गास अन्न खान दिए पनि सहारा दिन कसैले मानेका छैनन् । पोहोर साल फुसले छाएको घर भत्केपछि मर्मत गरिदिएको स्थानीय गोरे बोहराले बताउनुभयो । कपडा सिलाएर बाल बच्चा पाल्दै आएको सालिभानको मृ,त्युपछि परिवारको बिचल्ली भएको बोहराले बताउनु भयो । बोहराले भन्नुभयो, “ बालिकाहरुको घरको अवस्था एकदमै नाजुक छ ।
लुगा सिलाएर अन्न मागेर परिवारको गुजारा गर्ने सालिभान दमाईको मृत्युपछि परिवारको बिचल्ली भएको हो । जग्गा जमिन केही छैन । आमाले गाउँगाउँ डुलेर मागेको अन्नले कहिलेकाही छाक टार्ने गरेका छन् । आज पनि आमा कता गाउँतिरै गएकी छिन्। भएको बेला हामीले पनि एक गाँस दिने गरेका छौं।” पेटभरि खानखा नपाएको दिन रमाइलो हुने गरेको १० वर्षीया जेठी दिदी सविता नेपालीले बताउनुभयो । लगाउने लुगा र रातिओढ्ने कपडा नहुँदा आगो बालेर निदाउने गरेको सविताले बताउनुभयो ।
“आकाश खुलेको दिन दिउँसो घाम ताप्छौं । राति आगो बाल्ने गरेका छौं । निदाएको बेला कहिलेकाँही त हात पोलिन्छ” सविताले भन्नुभयो, “आमा पल्लो गाउँमा मकै माग्न जानुभएको छ। आएपछि जातोमा दलेर खोले पकाउने भन्नुभएको छ ।” यो खबर आजको गोरखपत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
**समाचारको पुरा भिडियो हेर्नुहोला***
४ वर्षकि छोरीको कानको मुन्द्रा समेत लिएर श्रीमति हिडिन्, कतारबाट घर फर्कदा छोरीको यस्तो बिजोग देखेर भक्कानिए बिरवहादुर (भिडियो हेर्नुस्)
यस्तो अचम्मको घटना, जुन सुनेपछि तपाई अचम्म मात्र नभई तर्सिनु हुन्छ, रातमा रगत निकाल्ने यी महिला!
गगन थापाले राजनीति छाड्ने समयसिमाकाे घोषणा गरेपछि …
कोरोनाको बारे के भन्छन् सेलिब्रेटी को-को छन सामाजिक संजालमा सक्रिय (भिडियो सहित)
ब्लडक्यान्सरकै कारण सबैबाट टाढिएका बिरबल तामाङः मानवरूपी भगवानहरूकाे यस्तो सहयोग!
बिहे गरेको ४ महिनामा छोडेर हिडेको राजु, छोरो १६ बर्ष पुग्दानि अझै फर्केनन् (भिडियो हेर्नुस्)
८ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीसँग भागिन् शिक्षिका…
हे भगवान! सानबुवालाई भतिजीसंग रंगेहात भेटेपछि हातै भाँचिदिए – (हेर्नुस् पुरा भिडियो)